I-China PVC RIGID CORE SHEET EXTRUSION LINE Ukukhiqiza nefektri | Jiahao
I-PVC RIGID SHEET EXTRUSION LINE
Imodeli JHZ80 / 156 / JHZ92 / 188 / JHZ 110/220
Amandla 300kg / ihora kuya ku-1500kg / ngehora
Ngokuya ngesimo sokwakheka kwezinto ezihlanganayo
Ngokuya ngesimo sokwakheka kwezinto ezihlanganayo, inqubo yokukhipha iphrofayli yepulasitiki ingahlukaniswa nge-coextrusion yangaphambi nangemva kokuhlanganiswa. I-pre coextrusion isho ukwakheka okwakhiwe kwezinto ezimbili ngenkathi kwenziwa ukwakheka okungaphelele; I-post coextrusion isho ukuthi into eyodwa yakhiwe ngokuphelele bese ihlanganiswa nenye into. Ubuhle be-post coextrusion ukuthi kungasetshenziswa imfucuza futhi nomnotho ungcono.
Inqubo yokukhishwa kwephrofayili yepulasitiki ingahlukaniswa nge-organic co extrusion kanye nezinto ezingaphili ze-co extrusion ngokuya ngezinto ezihlukile ze-extrusion. I-organic coextrusion ifaka ukuhlanganiswa kwangaphambili kwento efanayo (njengezinto ezinhle nezinto ezisetshenzisiwe), ukuhlanganiswa kwangaphambili kwezinto ezahlukahlukene (njenge-PMMA ne-PVC) nokuthunyelwa kweposi kwe-PVC ethambile futhi elukhuni; I-coextrusion engaphili ingahlukaniswa nge-coextrusion eyinhlanganisela ye-aluminium-plastic nensimbi eyakhiwe ngenhlanganisela yepulasitiki.
Leli phepha ligxile ekuhlanganisweni kweposi, i-aluminium plastic composite profile coextrusion, insimbi yeplastiki eyinhlanganisela yokuhlanganiswa kwephrofayili kanye nokuhlanganiswa kwemibala emibili.
Uma kuqhathaniswa nobuchwepheshe bendabuko be-FCE, ubuchwepheshe be-post coextrusion bunezinzuzo zenqubo elula, uhlelo lokusebenza oluguquguqukayo, isilinganiso esilahlekile sezinto ezilahliwe, ukutakula kalula namandla okunamathela alawulwayo. Njengamanje, ubuchwepheshe busetshenziswa kakhulu ekwenziweni kwephrofayili ngomugqa wokuvala uphawu wezicabha namawindi.
Ubuchwepheshe bendabuko be-extrusion bephrofayili yepulasitiki yangaphambi kokuhlanganiswa yisinyathelo esisodwa sokwakha ubuchwepheshe. Izinto zokuncibilikisa ezinokuziphatha okwehlukile kwe-rheological noma imibala ziyakhishwa kusuka kuma-extruders angaphezu kwamabili kuye ekufeni okufanayo. Lokhu kuncibilika kugeleza emigudwini yabo efa ekwakheni, bese kuguquka lapho kufakwa i-extrusion, bese kuvuleka emikhonweni wokusetha ukuze kuphole futhi kusethwe.
Ubukhulu 1mm kuya ku-20mm
Usayizi 1000 x 2000mm, 1220 x 2000mm, 1250 x 2000mm, 1220 x 2440mm.
Umbala Ojwayelekile I-Industrial Grey, ebomvu, futhi emhlophe
Langaphambilini I-PVC SHEET SHEET EXTRUSION LINE
Olandelayo: Umugqa Wokukhiqizwa Kweshidi le-PVC
PVC Iphrofayili Extruder
PVC Ishidi Extruder
PVC Izinkuni Extruder